Waa imise raggii maanta ay maxkamadda Puntland ay xukunka dil ah ku fulisay? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Waa imise raggii maanta ay maxkamadda Puntland ay xukunka dil ah ku...
Boosaaso (Halqaran.com) – Waxaa maanta maxkamada Ciidamada Puntland, ay dil toogasho ah ku fulisay 5 nin oo lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo Daacish.
Raggaan maanta la toogtay ayaa waxay mudo ku xirnaayeen xabsiga magaaladda Boosaaso, waxaana ciidamada ammnigu ay horay uga soo qabqabteen gudaha deegaanada Puntland.
Puntland horay waxaa loogu dilay rag lagu eedeeyay in ay Shabaab iyo Daacish la shaqeynayeen.
maxkamada ciidamada Puntland
rag Shabaab ah
xukun dil ah ku fulisay